घरमा प्रभावकारी रासायनिक बोक्रा अहिले उपलब्ध क्याल्सियम क्लोराइड फेयर सेक्स प्रत्येक छ: यसको घटक सस्ती, सरल प्रविधि र प्रदर्शन हो। "Bedroll" भनिन्छ व्यवसायीक बीच कस्मेटिक प्रक्रिया पछि खोजे।
त्यो, एउटा अचम्मको कायाकल्प प्रभाव छ खाली blackheads र अन्य अशुद्धियों को अनुहार, मृत कक्षहरू पूर्ण, नेत्रहीन ताजा अनुहार exfoliates र छाला मा समस्या क्षेत्रको छुटकारा गर्न मद्दत गर्छ। scrupulously आक्रामक रासायनिक तयारी सुरक्षित प्रयोग को नियम पालना गरेर क्याल्सियम क्लोराइड संग छाला को उपचार देखि केबिन परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ।
प्रक्रिया को सार,
मानव epidermis अपग्रेड वृद्ध र मरिरहेका छाला कक्षहरू, थप रिकभरी र जवान epithelium को उद्भव सँगसँगै छन् जो को लगातार प्रक्रिया कारण हो। नियमित exfoliation - छाला हेरविचार को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान। keratinous बाहिरी तह हटाउन विभिन्न Scrubs लागू एक यांत्रिक विधि द्वारा बाहिर हुन सक्छ। घरमा peeling क्याल्सियम क्लोराइड - तर अझ प्रभावकारी तरिका छैन। पथलैया औद्योगिक र नियन्त्रण क्षति छाला regenerative प्रक्रियाको बाहिरी तह सक्रिय साथ, यो कोलैजेन र elastin को संश्लेषण उत्साहित - मुख्य "बिल्डर्स" छाला लास यसको गुणस्तर अद्यावधिक हुन्छ।
एसिड र alkalis: यो दुई पदार्थ को अन्तरक्रिया आधारित छ देखि bedroll-प्रक्रिया को संयन्त्र, एकदम सरल छ।
प्रतिक्रिया क्याल्सियम क्लोराइड छाला मा सञ्चय, कुनै सुगंध संग प्राकृतिक साबुन मा रहेको उच्च carboxylic एसिड को पोटासियम वा सोडियम लवण संग, गुच्छे को फारम, मा अघुलनशील whitish लवण गठन जो मरेको छाला कक्षहरू कब्जा कोमल मालिश रोल को माध्यम द्वारा। यी घर्षण मोती शीर्ष प्रदर्शन गर्ने प्रभावकारी छन् सतह peeling, कोमल छाला। alkaline छ नै साबुन घटक, मा, राम्ररी sebum अतिरिक्त को अनुहार शुद्ध पार्छ।
पहिलो प्रयोग गर्नेहरूलाई क्याल्सियम क्लोराइड, घर मा अनुहार peels चरम सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। Beauticians अनुभवी सौंपन पहिलो प्रक्रिया प्रदर्शन गर्न सिफारिस गर्छौँ। यो himpreparatov लामो स्थिति overexpose छैन ताकि, आक्रामक पदार्थ को सही औषधिको खुराक चयन र प्रक्रिया को सबै भन्दा राम्रो समय सिफारिस गर्न मद्दत गर्नेछ। र केवल आफ्नो व्यावसायिक सल्लाह किनभने, तपाईं स्वयं improvisation सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईं क्याल्सियम क्लोराइड तपाईं एलर्जी छैन निश्चित गर्नुपर्छ। यो एक औषधि पसल पदार्थ समाधान (5%) को कुहिनो को भित्री पक्ष मा खरिद एउटा सानो रकम लागू गरेर स्वतन्त्र गर्न सकिन्छ। एक सानो रातो अलग्गै कुनै प्रतिकूल पक्ष प्रतिक्रिया हो भने, "हलिउड" peels गर्न सकिन्छ। अनुभवी प्रयोगकर्ता बाहिर सप्ताह अघि शुक्रबार साँझ मा प्रक्रिया bedroll पूरा गर्न सल्लाह छन्।
रसायन गर्न जोखिम, को epidermis सफाई र मृत कक्षहरू हटाउन एक वा दुई दिन भित्र गायब जो छाला, को प्राकृतिक राता को उपस्थिति गर्न जान्छ। यस पछि रासायनिक peeling क्याल्सियम क्लोराइड blackheads, अतिरिक्त sebum, keratinized कणहरु र ठीक लाइनहरु को छाला शुद्ध, तपाईं एजेन्ट कम भएको epidermis व्यवहार गर्न आवश्यक छ। यो छाला को अवस्था सुधार गर्न र प्रक्रिया पछि पुनर्वास प्रक्रिया गति अप हुनेछ। Cosmeticians यसलाई बलियो रासायनिक छाला बल्न सक्छ देखि सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन को लागि 10 प्रतिशत एकाग्रता लागू गर्न पहिलो क्याल्सियम क्लोराइड सामना बालिका सल्लाह छैन। को dermis पछि मात्र पाँच प्रतिशत समाधान द्वारा बख्शते लागि adapts, तपाईं एक 10% अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ।
कसले रासायनिक गर्न सक्छन् peels क्याल्सियम क्लोराइड?
पहिले र प्रक्रिया आफ्नो प्रयोग को परिणाम प्रहार गरेका बारम्बार धेरै newcomers बढावा पछि फोटो।
मद्दत को उपस्थिति मा क्याल्सियम क्लोराइड अनुहार मास्क: तेल वा dermal वसामय अंश टी क्षेत्र संग संयुक्त; प्रदूषण, भरा वा बढेको pores; व्यक्ति peeling; comedones; बारम्बार भडकाऊ प्रक्रिया; pigmentation; महत्वपूर्ण उमेर-सम्बन्धित छाला परिवर्तन।
क्याल्सियम क्लोराइड संग मान्छे को लागि घर मा peeling निषेधित: असहिष्णु र खतरा एलर्जी प्रतिक्रिया गर्न himpreparatov; सुक्खा र संवेदनशील dermis छ; एक छाला रोग एकाइ; विकारहरु निष्ठा (चोट लागेको, खरोंच, कटौती, extruded वा मुखासे pimples) कवर; चिसो sores संग; dermatological रोगहरु साथै गर्भावस्था र सुत्केरी बच्चा समयमा सामना।
प्रक्रिया को भाग रूपमा बाहिर गर्न सकिन्छ?
छाला प्रकार, प्रकार र घर मा कस्मेटिक समस्या क्याल्सियम क्लोराइड peeling उपलब्धता आधारमा समस्या छाला र बढेको pores संग मान्छे को लागि थप एक पटक भन्दा एक हप्ता बाहिर गर्न सकिन्छ।
Wherein को दवादारू राम्रो पानी आधा पतला वा लागू समाधान को पाँच प्रतिशत एकाग्रता छ। संयुक्त छाला मानिसहरूलाई पर्याप्त एक प्रक्रिया मा दुई वा तीन हप्ता टि-क्षेत्रमा कस्मेटिक कमजोरीहरू हटाउन। किशोरीहरूको cosmetologists मात्र विश्वसनीय र सुनिंनु र extruded मुखासे को अभाव मा कुनै दुई पटक एक महिना भन्दा बढी बनाउन हुनुपर्छ मुखासे सुक्खा सफाई झुकाउ छन्।
सफाई को लागि के आवश्यक छ
घर क्याल्सियम क्लोराइड मा उच्च गुणवत्ता रासायनिक peels बनाउन आवश्यक छ: क्याल्सियम क्लोराइड, एक फार्मेसी मा खरिद। यो ampoules वा vials मा प्याकेज गर्न सकिन्छ। पहिलो प्रक्रिया सञ्चालन गर्नेहरूका लागि पर्याप्त 5% समाधान, र त्यसपछि दबाइ को 10% लागू; बच्चा साबुन (fillers र इत्र बिना - कुनै पनि घटक प्रतिक्रिया neutralize र शून्य सबै प्रयासमा कम गर्न सक्छ) को फोम बनाउन, जो देखि; कपास पैड।
प्रक्रिया को लागि तयारी
कस्मेटिक सत्र अघि नमूना मार्फत सक्रिय घटक एलर्जी प्रतिक्रिया को संभावना हटाउनु आवश्यक छ। यो कुहिनो वा नारी को भित्र मा क्याल्सियम क्लोराइड को एक थोपा लागू गर्न आवश्यक छ। मा जल प्रकाश को उद्भव 10 मिनेट को लागि एक सामान्य प्रतिक्रिया मानिन्छ, तर यदि त्यहाँ एक तेज जलन, खुजली, दाह, राता र बलियो फुट्ने काम को उपस्थिति को रूप मा बेचैनी छ, प्रक्रिया कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन।
घटक को कुनै घृणाको गर्नेहरूलाई लागि, त्यहाँ क्याल्सियम क्लोराइड संग अनुहार को रासायनिक सफाई को लागि धेरै विकल्प छन्, तिनीहरूले छाला तयार गर्न आवश्यकता नै प्रतिक्रिया आधारित छन्। यो गर्न, माथि हटाउने, रहनसहन, कुनै पनि धूलो र माटो को अनुहार निशान देखि हटाउने बनाउन, एक नरम तौलिया संग छाला गीला र यसलाई पूर्ण ड्राई नभएसम्म प्रतीक्षा धुन। प्रक्रिया अघि सफा सुक्खा छाला - peeling द्वारा आयोजित उच्च गुणवत्ता को एक कसम।
गलत तरिकाले प्रदर्शन घरमा peeling रासायनिक अनुहार क्याल्सियम क्लोराइड छाला को गिरावट, pigmentation को उपस्थिति, शुष्क सुदृढ, अवरोध पीएच (एसिड-आधार ब्यालेन्स) dermis हुन सक्छ। sensations को अप्रिय लक्षण राम्ररी सत्र समयमा अनुगमन हुनुपर्छ को घटना रोक्न।
अलि कति बलिरहेको वा झुनझुनी peeling समयमा - रासायनिक irritants गर्न छाला को एक सामान्य प्रतिक्रिया। यी लक्षण बलियो एक आक्रामक छाला, दबाइ बाल्न प्रक्रिया तुरुन्तै रोकियो गर्नुपर्छ त संकेत हुन सक्छ। Peeling र बिहान अनुहार राता सत्र पनि कस्मेटिक सामान्य प्रतिक्रिया एक दुई दिन भित्र ठाउँ लिन्छ जो मानिन्छ पछि।
हस्तक्षेप विकल्प प्रक्रिया
यस मामला मा, घर क्याल्सियम क्लोराइड मा peeling पूर्व-प्रक्रिया अनुहार छाला छ suds को तह, लागू हुन्छ (आँखा वरिपरि क्षेत्र र माथिल्लो ओठ माथिको क्षेत्र मा स्पर्श छैन!)। मालिश आन्दोलनहरु प्राथमिक तह गुच्छे गठन भएपछि छैन, लोकप्रिय "spool" भनिन्छ, फेरि यदि क्याल्सियम क्लोराइड हुन सक्छ। को घर्षण मोती उनको अनुहार मा देखा पछि, तपाईं बिस्तारै छाला मालिश गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति creaking हेर्न सम्म। त्यसपछि गुच्छे, crumble यो समयमा न्यानो पानी संग आफ्नो अनुहार धुनु सुरु गर्नुहोस्। लुगा धुने पछि, विशेषज्ञहरु एक तौलिया प्रयोग सिफारिस छैन, र पानी छाला मा अवशोषित सम्म प्रतीक्षा सल्लाह छन्। कि पछि, तपाईं एक मइस्चराइजर लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै तेल छाला को लागि
उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू संग dermis को समस्या को लागि अक्सर घरमा थप कडे रासायनिक peels क्याल्सियम क्लोराइड छन्। यस मामला मा घटक लागू क्रम विपरीत बख्शते embodiment छ। पछि पूर्व-सफाई एक कपास क्याल्सियम क्लोराइड संग अनुहार प्लेट लागू र सुकाउने पूरा गर्न बाँकी छ, त्यसपछि आक्रामक संघटक को थप एक तह दोहोर्याइएको छ। तहहरू को कुल संख्या चार वा आठ टुक्रा वृद्धि गर्न सकिन्छ। अधिक तपाईं छाला मा क्याल्सियम क्लोराइड राख्नु, दबाइ गहिरो भित्र पस्नु, त्यसैले dermis एक रासायनिक जला प्राप्त गर्न, यो ज्यादा छैन प्रयास गर्नेछ। त्यसपछि छाला lather, बिस्तारै घर्षण गुच्छे (छर्रहरुमा) र विशेषता creaking फारममा छाला यसलाई दल्नु (तर हठधर्मिता बिना!) संग उपचार गरिएको छ। परिणाम हामी न्यानो पानी बिस्तारै धुन भने, स्वाभाविक अनुहार dries र छाला मइस्चराइजर व्यवहार गर्छन्।
घरमा क्याल्सियम क्लोराइड Peeling: समीक्षा
क्याल्सियम क्लोराइड संग जादुई प्रभाव bedroll कलात्मक बोहेमिया को प्रतिनिधिहरु, सौंदर्य सैलून को धेरै ग्राहकहरु सराहना साधारण मान्छे देखि। गहिरो सफा छाला यो सरल तर धेरै प्रभावकारी तरिका तपाईं एक आँखा को झिम्काइ मा थकान र dermis को उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू को संकेत मेटाउन अनुमति दिन्छ। तर, यो "हलिउड" peeling विधि धेरै आक्रामक छ।
यसको परिणाम प्रशंसा, धेरै महिला विरोधी भडकाऊ जडीबुटी (सेज, chamomile, पुदीना वा कैलेंडुला), आवश्यक तेल, केले र porridge प्रक्रिया पछि संग सूथिंग मास्क गर्न सल्लाह छन्। तर यस्तो उपाय छाला replenishment लागि राखन 5-7 मिनेट भन्दा कुनै थप हुन सक्छ।
यो क्याल्सियम क्लोराइड, समीक्षा यसलाई सही र अनुसार विशेषज्ञहरु को सिफारिसहरू संग प्रदर्शन हुँदा सधैं खुसी छन् जो संग घर मा रासायनिक peels अझै छाला बुढ्यौली रोक्छ कि ज्ञात छ। यो कारणले गर्दा sebum र लिपिड क्षति आवरण पत्र को सामग्रीको तीव्र कमी गर्न हुन्छ।
Coenzyme क्यू, यस्तो jojoba, Avocado, अंगूर बीउ तेल रूपमा तरकारी तेल मा ठूलो एकाग्रता मा उपलब्ध छ, ठीक dermis को सुरक्षा फैटी तह दुरुस्त राखेको छ। यस मामला मा, छाला, चिल्लो supple र स्वस्थ देखिन्छ! साथै, अनुभवी घर cosmeticians सूर्य वा छाला को chapping को उपस्थिति जोगिन केही दिनको लागि प्रक्रिया पछि सल्लाह; कस्मेटिक्स र धूपघडी को प्रयोग; उत्पादित छाला को प्राकृतिक पुनर्जनन हस्तक्षेप हुनेछ पसिना रूपमा खेल।
सफाई को प्रभाव यांत्रिक exfoliation को एकदम उच्च परिणाम सामना कि समग्र मूल्यांकन पुष्टि गर्नुहोस्। मुख्य कुरा कडाई निर्देशनहरू पालना, को sensations पालना र contraindications पालन गर्न।
नाभिमा भेला गर्दै: तपाईलाई थाहा छ
मुखासे सामना गर्न कसरी केही सुझावहरू
गुर्दे angiomyolipoma - कारणहरू, लक्षण, उपचार।
Tsarist रूस र विस्तार यसको इतिहास
आफ्नो जन्मदिन लागि असामान्य तातो खाना
चलचित्रको क्यारेक्टर र अभिनेता "माड मैक्स: द फाउन्डेशन अफ रोड"
प्वाइंटशर्ट के हो?
बीचमा समूह र वरिष्ठ मा औंला व्यायाम